» ॐ ॐ पाथिभरा माताले, सबैको मनोकामना, पुरा गरुन, मंसिर ७ गते मंगलबार, आज तपाईको, भाग्य कस्तो छ हेर्नुहो,स राशिफल” ॐ ॐ पाथिभरा माताले, सबैको मनोकामना, पुरा गरुन, मंसिर ७ गते मंगलबार, आज तपाईको, भाग्य कस्तो छ हेर्नुहो,स राशिफल” – हाम्रो खबर
ॐ ॐ पाथिभरा माताले, सबैको मनोकामना, पुरा गरुन, मंसिर ७ गते मंगलबार, आज तपाईको, भाग्य कस्तो छ हेर्नुहो,स राशिफल”
2021, November 23rd, Tuesday
हाम्रो खबर संबाद दाता 148 Views
“आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल मंसिर ७ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ नोभेम्वर २३ तारीख मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथी आद्र्रा नक्षत्र शुभ योग बालव करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा चर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणाय हेमन्त ऋतु मंगल चतुर्थी व्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)”
“मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बल तथा प्रराक्रममा बृद्धि हुनेयोग रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहनेछ । आम्दानिको क्षेत्र मध्यम रहनेछ । धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा गर्नुहोला ।
“बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाबको योग बन्नेछ । आम्दानिको क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य सम्पादनमा गोपनियताको आवश्यकता रहनेछ । मित्रजनहरु सगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
“मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) नयाँ कार्य थालनिको निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । मनमा सामन्य चिन्ता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला ।
“कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ ।
“सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धोका हुन सक्छ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ ।
“कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त नहुनाले मनमा चन्चलताको बास रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्राको कारणले शारिरिक आलस्यता ले सताउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने त्यति राम्रो नरहला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
“तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन ।
“बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला । निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक परिश्रम खर्चीनुपर्नेछ ।
“धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ । अधीक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछन । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला ।
“मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ । टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ ।
“कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका अवसरहरु प्राप्त रहनेछन ।
“मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । प्रतिस्ठीत ब्यक्तिहरुको सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहेतापनि अरुको अनुशरण गर्दा प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ ।
“ओलीले अध्यक्ष नजिते, सम्म खाना समेत, नखाई बसिन् ९१ बर्षिया भद्रकुमारी, जिते पछि, खुशिमा ,यस्तो सम्म गरिन्” (भिडियो हेर्नुस)
“ज्ञानेन्द्र शाही र कुलमान,बिच पहिलो एतिहासिक भेटवार्ता,अब गाऊँ उज्यालो, बनाउने कुलमानले गरे बाचा” ।
“पर्सा, गाउँपालिका, अध्यक्ष” बनिन”१६ वर्षिया अञ्जली कुमारी साह,बधाई छ।
“म रकेटको, स्पीडमा छु, कर्मचारी, थोत्रा ट्वीनटर, जस्ता छन्” : मन्त्री प्रेम आले”
“अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चमत्कार : अब नेपालमै धमाधम मोबाइल उत्पादन, महाबिर पुनको साथ”
“अमेरिका’ले, दियो ओली,लाई बधाई”
“जनार्दन शर्माले, भने ´प्रचण्ड पथ` “संसारकै उत्कृष्ट मार्ग दर्शनहो, कार्यान्वयन गर्न मत अघि बढे”
मन्त्री नै विमानस्थलमा ठ’गिएपछि एक्शनमा प्रेम आले, सुरु भयो यस्तो राम्रो सेवा !
माधव नेपाललाई देशको चिन्ता ! गरे यस्ता देशभक्त कुरा!
अब हामी कहिल्यै नफुट्ने भन्दै वाचा कसम खाए कमल थापाले, यो वाणाीले कतिन्जेली काम गर्ला ?
सडक र सदनबाट राजतन्त्र फर्काउछौं भन्दै कुर्लिए कमल थापा, के जनताले साथ देलान् त ?
ओलीले चाहेकै जस्तो एमालेमा हार्डलाइनर टिम,,,,
राप्रपा महाधिवेशन : राजेन्द्र लिङ्देन बोल्दा कार्यकर्ताको हु’टिङ
राजेन्द्र लिङ्देनलाई कमल थापाको जवाफ : नयाँ पुरानो भनेर विभाजनको रेखा कोर्न हु’न्न,,,,
( 2021, December 1st, Wednesday)